YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, May 05
5 May 2010 ဒိုင်ယာရီ
MS Word file ဒီမှာရယူပါ
5 May 2010 Yeyintnge Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/05/20100အကြံပြုခြင်း
အံကြိတ် လက်သီးဆုပ် မျက်လုံးချင်း စေ့စေ့ဆိုင်ကြည့်
၅/ မေ ၂၀၁၀
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ၂၀၀၉ ခု ဧပြီ (၂၉) ရက်မှာ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ အနိမ့်ဆုံး လိုအပ်ချက်တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးဖို့၊ နာဂစ်အခြေခံဥပဒေကို ပြန်သုံးသပ်ဖို့၊ နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံး လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခွင့်ရှိဖို့၊ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တွေကို တနည်းနည်းနဲ့ အသိအမှတ်ပြုဖို့၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ဆိုတဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေကို ကြေညာထားပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ခုနပြောတဲ့ အချက်တွေအပြင် နိုင်ငံတကာကြီးကြပ်မှုအောက်မှာ လွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးရင် ဝင်ဖို့ စဉ်းစားမယ်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
နအဖစစ်အစိုးရဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ သဘောထားတွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ မတ်လ (၈) ရက်နေ့စွဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေတွေ ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပဒေတွေထဲမှာ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ပျက်ပြယ်ပြီလို့ ဇွတ်အတင်း ထည့်ထားသလို ရက် (၆၀) အတွင်း မှတ်ပုံပြန်မတင်ရင် အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပါတီအဖြစ်က ပျက်ပြယ်မယ်လို့လည်း ထည့်သွင်းခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။
အဖွဲ့ချုပ်ဟာ မတ်လ (၂၉) ရက်မှာ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးထိုင်ပြီး မှတ်ပုံမတင်ဖို့နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ဖို့ တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒုတိယ မဲအများဆုံးရခဲ့တဲ့ လက်ရှိ တရားဝင် ရပ်တည်ခွင့်ရ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မှတ်ပုံမတင်ဘူးလို့ မေ (၃) ရက်မှာ ဆုံးဖြတ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
မှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့ နအဖရဲ့သတ်မှတ်ရက်က မေ (၆) ရက်မှာ ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခု မတ်လမှာ နအဖဟာ အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ် သို့မဟုတ် အိမ်စောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီး နအဖ ဦးဆောင်မှုကို အကြွင်းမဲ့ ခံယူဖို့နဲ့ မိမိတို့နယ်မြေ မိမိတို့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကို နအဖလက်အောက် ထိုးအပ်၊ မိမိတို့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖျက်သိမ်းဖို့ အမိန့်ပေးလာပါတယ်။
ဒီလိုအသွင်ပြောင်းဖို့အတွက် ၂၀၀၉ မေလကုန်မှာ စာရင်းပေးပြီး စက်တင်ဘာလကုန်မှာ အပြီးပြောင်းလဲဖို့ နအဖက ရက်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ တပ်တွေကို အသွင်ပြောင်း၊ ခေါင်းဆောင်တွေက ပါတီမှတ်ပုံတင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်၊ ဒီလိုမလုပ်ရင် မတရားသင်း ကြေညာပြီး တိုက်မယ်လို့ နအဖက ဖိအားပေး ခြိမ်းခြောက်တာတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် (ကချင်ပြည်နယ်)၊ ကချင်ကာကွယ်ရေးတပ်၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့၊ ကရင်နီပြည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး၊ တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်တို့က အသာတကြည် ခေါင်းညိတ်ခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းညိတ်ပေမယ့် ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် (ကချင်ပြည်နယ်) က ၂၀၁၀ လွှတ်တော်မှာ နအဖစစ်တပ်အတွက်ထားတဲ့ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာ အပစ်ရပ်တပ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းဖို့ မရဲတရဲ တောင်းဆို သွေးတိုးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ၊ ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရှမ်းအရှေ့ နိုင်ငံရေးနှင့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (ဝါ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် (မိုင်းလားအထူးဒေသ-၄)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်၊ ကယန်းပြည်သစ်ပါတီ၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ့ (ကိုးကန့်) တို့က နယ်ခြားစောင့်တပ်လုပ်ရေးကို ပယ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါ ၂၀၀၉ သြဂုတ်လမှာ နအဖဟာ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ့ကို စမ်းသပ်တိုက်ကွက်ဖော် ချေမှုန်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီက နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တောင်းဆိုချက် (၉) ချက်ကို ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာ (၁၀) ရက်မှာ နအဖဆီ ပေးပို့ခဲ့ပေမယ့် နအဖက လုံးဝပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ အထူးဒေသ-၄ မိုင်းလား ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့က ဖေဖော်ဝါရီ (၂၈) ရက်မှာ အဆိုပြုချက် (၆) ချက်တင်ခဲ့တာကိုလည်း နအဖက ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ မတ်လမှာ နအဖက အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ဧပြီလကုန် (၂၂) ရက် သို့မဟုတ် (၂၈) ရက်မှာ အပြီးပြောင်းဖို့ (၅) ကြိမ်မြောက် ရက်ချိန်းထပ်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီရက်ချိန်းမရောက်ခင်မှာ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်နဲ့ ကယန်းပြည်သစ်ပါတီတို့က အိမ်စောင့်တပ်အတွက် လူစာရင်းကို နအဖဆီ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တပ်မဟာ (၁) ကတော့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် လူစာရင်းပေးတဲ့အထဲ မပါဝင်ဘဲ နေပါတယ်။
ဧပြီ (၃) ရက်မှာ ဝ က ထိုင်းနယ်စပ်က (၁၇၁) စစ်ဒေသကို ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသထဲထည့်ဖို့ တောင်းဆိုချက်ကို (တရုတ်နိုင်ငံ အကြံပေးတဲ့အတိုင်း) စွန့်လွှတ်တာ၊ တပ်ရင်းအဆင့်မှာ နအဖစစ်သား (၆) ယောက်ထည့်တာ အပါအဝင် အဆိုပြုချက်သစ် (၈) ချက်တင်တာကို နအဖက (၉) ရက်နေ့မှာ ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့က ဧပြီ (၁၈) ရက်မှာ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ဧပြီ (၂၂) မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ် သို့မဟုတ် အိမ်စောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကို အပြီးအပြတ် ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကေအန်ယူက ခွဲထွက်ပြီး နအဖနဲ့ စေ့စပ်သွားခဲ့တဲ့ တပ်မဟာ (၇) မှူးဟောင်း ဗိုလ်ဌေးမောင်ရဲ့ ကေအန်ယူငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီကလည်း ဧပြီ (၂၁) ရက်မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ် မလုပ်နိုင်ကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသား အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်။ တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ထဲမှာလည်း နယ်ခြားစောင့်တပ်လုပ်ဖို့ ငြင်းဆန်သူတွေ ပေါ်လာနေပါတယ်။
နအဖတပ်ထဲမှာလည်း နယ်ခြားစောင့်တပ်ထဲသွား တာဝန်မယူချင်တာတွေ ဖြစ်နေသလို တိုင်းအဆင့် ဗျူဟာအဆင့်က သန်းရွှေ-မောင်အေး ကျေနပ်အောင် နယ်ခြားစောင့်တပ်လုပ်မယ့် လူအင်အားစာရင်းတွေ လိမ်တင်တာလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို သွားခိုင်းဖို့ကလည်း ကလေးစစ်သားတွေ အများစု ဖြစ်နေပါတယ်။
နအဖက သာစည်၊ တောင်ကြီး၊ သီပေါ၊ လားရှိုး၊ ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနား၊ မော်လမြိုင်တို့ကို ဖြတ်ပြီး စစ်ကားတွေ၊ တင့်ကားတွေ၊ အမြောက်တွေ သယ်ယူပို့ဆောင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အမ်အိုင်ဂျီ (၂၉) လေယာဉ်တွေ ဓာတ်ဆီအကုန်ခံ ပျံပြတာလည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တပ်မဘယ်နှခု၊ တပ်ရင်းဘယ်နှရင်း ဘယ်နယ်စပ်ဒေသတွေကို ပို့ထားပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဧပြီ (၂၂) ရက်၊ (၂၈) ရက်တွေ ကျော်သွားခဲ့ပါပြီ။ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေက ကြံ့ကြံ့ခိုင် ရင်ဆိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၂ ခု အောက်တိုဘာ (၁၄) ရက်မှာ အမေရိကန်သူလျှိုလေယာဉ်က အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ မိုင် (၉၀) ဝေးတဲ့ ကျူးဘားနိုင်ငံမှာ ရုရှဒုံးပျံစခန်းတွေ ဆောက်နေတာကို ထောက်လှမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဒုံးပျံတွေဟာ မိုင် (၂,၄၀၀) အဝေးကို ပစ်နိုင်ပြီး အဏုမြူထိပ်ဖူးတွေ တပ်ထားပါတယ်။
အောက်တိုဘာ (၁၆) ရက်မှာ သမ္မတကနေဒီ တက်ရောက်တဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးက နည်းလမ်း (၅) ခု စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတိုင်း လွှတ်ထားဖို့၊ သံတမန်ဖိအား သုံးပြီး ဒုံးပျံတွေ ရုပ်သိမ်းစေဖို့၊ ဒုံးပျံစခန်းတွေကို လေကြောင်းက တိုက်ခိုက်ဖို့၊ ကျူးဘားနိုင်ငံကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် စစ်အင်အားသုံး ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ဖို့၊ ကျူးဘားနိုင်ငံကို ရေတပ်အင်အားသုံး ပိတ်ဆို့ထားဖို့ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့ကတော့ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ဖို့ နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်အဆိုပြုခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဗီယက်နမ်စစ် လက်သည်လို့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မက္ကနာမားရားကတော့ ဒီဒုံးပျံ အစင်း (၄၀) လောက်ဟာ ဘာမှမပြောပလောက်ဘူး၊ အရေးလုပ်စရာ မဟုတ်ဘူးလို့ သဘောထားပေးခဲ့ပါတယ်။ (အဲဒီတုန်းက အမေရိကန်မှာ ဒုံးပျံ အစင်း (၅,၀၀၀) လောက်ရှိနေပြီး ရုရှမှာတော့ (၃၀၀) ကျော်ပဲရှိလို့တဲ့။) စစ်ရေးအရ အရေးမထားလောက်ပေမယ့် နိုင်ငံရေးအရတော့ အမေရိကန် အကြီးအကျယ် သိက္ခာကျစရာ ဖြစ်မယ်လို့တော့ အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီက တညီတညွတ်တည်း သဘောတူကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ နည်းလမ်း (၅) ခုမှာ ရေတပ်နဲ့ ပိတ်ဆို့ရေးကို ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ (၂၂) ရက်မှာ ကျူးဘားမှာ ဒုံးပျံတွေ ရောက်နေတဲ့ကိစ္စကို အမေရိကန်က တကမ္ဘာလုံးကို အသိပေးလိုက်ပြီး ရေတပ်နဲ့ ပိတ်ဆို့မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ (၂၄) ရက်မှာ အမေရိကန်ရေတပ်က ကျူးဘားနိုင်ငံကို မိုင် (၈၀၀) အကွာကနေ စတင်ပိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ အမေရိကန်တပ်တွေကိုလည်း အဆင့် (၂) တပ်လှန့်အခြေအနေ လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ကာလမှာ အမြင့်ဆုံး တပ်လှန့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ တပ်လှန့်ကြေးနန်းစာကိုလည်း ဝှက်စာမသွင်းဘဲ ဗြောင်ပို့ခဲ့တယ်။ ကျူးဘားကို သွားတဲ့ သင်္ဘောအားလုံးကို ရပ်ခိုင်းပြီး တက်ရှာတာ လုပ်တယ်။ မသွားစေချင်တဲ့ သင်္ဘောတွေကို ပြန်လှည့်ခိုင်းတယ်။ မရပ်တဲ့ သင်္ဘောတွေကို ပစ်ခတ်ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ အမိန့်အပြတ်ပေးထားတယ်။ စစ်လက်နက်မပါတဲ့ သင်္ဘောတွေကိုတော့ ဖြတ်သွားခွင့်ပေးပါတယ်။
ရုရှကလည်း ပင်လယ်ပြင်မှာ ပင်လယ်ဓားပြအလုပ်မျိုးကို လက်မခံနိုင်ဘူး၊ လိုအပ်သလို အင်အားသုံး တုံ့ပြန်မယ်လို့ အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ အဏုမြူဒုံးပျံတွေ တင်ထားတဲ့ ရုရှသင်္ဘောတွေဟာ ကျူးဘားကို ဦးတည်လာနေပါတယ်။
(၂၅) ရက်မှာတော့ အမေရိကန်က အဏုမြူဗုံးတွေကို ဗုံးကြဲလေယာဉ်တွေပေါ် စ,တင်ခဲ့ပါတယ်။
(၂၆) ရက်မှာ ရုရှဝန်ကြီးချုပ်က ဒုံးပျံတွေ ရုပ်သိမ်းပေးမယ်၊ အမေရိကန်ကလည်း ကျူးဘားကို မကျူးကျော်ဘူးဆိုတာ ကတိပေးရမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ (၂၇) ရက်မှာ တူရကီမှာရှိတဲ့ အမေရိကန်ဒုံးပျံတွေ ရုပ်ပေးဖို့လည်း ရုရှက တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ (၂၇) ရက်မှာပဲ ကျူးဘားမှာရှိတဲ့ ရုရှအဏုမြူဒုံးပျံတွေကို ပစ်ခတ်ဖို့ အသင့်အနေအထား လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျူးဘားသမ္မတ ကက်စထရိုကလည်း အမေရိကန်လေယာဉ်တွေကို တွေ့သမျှ ပစ်ချဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ ရုရှကနေ အမေရိကန်ကို စတိုက်ဖို့လည်း ရုရှဝန်ကြီးချုပ်ကို တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် သူလျှိုလေယာဉ်တစီးကိုလည်း ကျူးဘားက ပစ်ချခဲ့ပါတယ်။ တခြားစစ်လေယာဉ်တွေကိုလည်း ပစ်ပေမယ့် ထိခိုက်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဏုမြူတော်ပီဒိုတွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရုရှရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို တားဆီးဖို့ ရေမြှုပ်ဗုံးတွေကိုလည်း အမေရိကန်ရေတပ်က ချခဲ့ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ (၂၈) ရက်မှာတော့ ရုရှစစ်သင်္ဘောတွေဟာ နောက်ပြန်လှည့်သွားပါတော့တယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲ ရုရှတွေက ဒုံးပျံတွေ ရုပ်သိမ်းပေးမယ်၊ အမေရိကန်က ကျူးဘားကို မကျူးကျော်ဖို့ အာမခံမယ်ဆိုပြီး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ရှေ့မှာ နှစ်ဘက်သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ရုရှနိုင်ငံနဲ့ ကပ်နေတဲ့ တူရကီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမေရိကန် အဏုမြူဒုံးပျံတွေကိုတော့ နောက် (၆) လအကြာမှာ အမေရိကန်က ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒင်းရပ်စ်က “ကျုပ်တို့ တယောက်ကိုတယောက် မျက်လုံးချင်း စေ့စေ့ဆိုင်ကြည့်နေခဲ့ကြတာ ဟိုဘက်ကကောင်က မျက်တောင်ခတ်သွားတယ်” We've been eyeball to eyeball and the other fellow just blinked. လို့ သမိုင်းဝင်မှတ်ချက်စကား ပြောခဲ့ပါတော့တယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ အိုင်စင်ဟောင်ဝါကို “ခင်ဗျားမြေးတွေ လက်ထက်ကျရင် အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ကွန်မြူနစ်စနစ်အောက် ရောက်နေလိမ့်မယ်” လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရုရှဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ၁၉၆၂ ခု ကျူးဘားအရေးအခင်းမှာ နိုင်ငံရေးအရ သိက္ခာကျ ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တာဟာ နောက်နှစ်ပေါင်း (၃၀) အကြာမှာ ဆိုဗီယက်ရုရှနိုင်ငံ ပြိုကွဲတဲ့အထိ ဦးတည်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကြားထဲမှာ ၁၉၆၈ ခု ချက်ကိုစလိုဗေးကီးယားကို ကျူးကျော်တာ၊ ၁၉၇၉ ခု အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ကျူးကျော်တာတွေတော့ ထလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကွဲသွားတာပါပဲ။
နအဖနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ၊ နအဖနဲ့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေ တယောက်ကိုတယောက် မျက်လုံးချင်း စေ့စေ့ဆိုင်ကြည့်နေကြပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ချင်းပြိုင်ရာမှာ ဘယ်သူက မျက်တောင် အရင်စ,ခတ်မလဲ။ ။
SYCB monthly Bulletin for April (Vol.4, Issue-39)
SYCB monthly Bulletin for April (Vol.4, Issue-39) issued by the Students and Youth Congress of Burma (SYCB) . Please see that in the attachment in PDF.
Organizing & Information Committee (OIC)
SYCB Monthly Bulletin for April (Vol-4, Issue-39)
NLD ဦးခင်မောင်ဆွေရဲ့  သဘောထားအမြင် သုံးသပ်ချက်
မေလ (၆) ရက်နေ့ တည်ဆဲပါတီတွေ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ဖို့ သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်သွားရင်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ တရားဝင်ပါတီအဖြစ်ကနေ ရပ်စဲခံရမယ့် အနေအထားမှာ ရှိနေပါပြီ။ ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် တဦး ဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ဆွေ ကတော့ သူတဦးတည်းအနေနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလ (သို့မဟုတ်) ပါတီသစ်ထောင်ဖို့ ဆန္ဒမရှိပေမဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီတခုရဲ့  တာဝန်တရပ်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ အခြေခံဥပဒေတွေကို လက်တွေ့ကျကျ တောင်းဆို လိုတဲ့ သူတွေနဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် ဦးဆောင်ပြီး ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ချက်ချင်းမဝေဖန်သေးဘဲ စောင့်ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
ဦးခင်မောင်ဆွေ ။ ။ နိုင်ငံရေးတာဝန်ကို ဆက်ထမ်းတယ်ဆိုရင် ပါတီနိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ ပါတီတရပ်အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြတ်သန်းဖို့ဆိုတာ အမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့ အနေအထားတရပ်ပါ။ သို့သော်လည်း ပါတီ ဖျက် လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ နိုင်ငံရေးပါတီကို ဆက်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးတာဝန်ထမ်းဖို့အတွက် ပြည်သူကြား ထဲမှာ စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအကွက်တွေဆိုက်တဲ့အခါမှာ လှုပ်ရှားဖို့ပါ။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံရေးကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာ ပြီးတော့ ပြည်သူနဲ့အတူကြည့်ပြီးတော့ မိမိတို့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးတံခါးပေါက်တွေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါ ဒီ တံခါးပေါက်တွေကဝင်ပြီး ပြည်သူအတွက် အကျိုးဆောင်ဖို့ရာ ပါတီမရှိတော့လည်း လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေ ရှိတယ် ဆိုတာ ကျနော်တို့ ပါတီဖျက်ပြီးတဲ့အခါ နိုင်ငံရေးပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီး စောင့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေ ရှိနေတာ အထင်အရှားပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်အနေနဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ အမျိုးသား တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့ပေါ့။ ဒီနေရာမှာ အခုလက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲကို အခြေခံပြီးလုပ်မယ့် အခြေခံဥပဒေတွေနဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေဟာ တရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရ ဒီလို တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို မဝင်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူရဲ့  နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုအနေနဲ့ ပါတီကို ဖျက်သိမ်းရမယ်၊ ဖျက်သိမ်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို ဒီလိုမျှတမှုမရှိတဲ့ အခြေခံတွေနဲ့ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ဝင်ရောက် သင့်တယ်လို့ ဆရာတို့အနေနဲ့ ယူဆလို့လား။
ဦးခင်မောင်ဆွေ ။ ။ အဲဒီ မေးခွန်းကတော့ ဘယ်မှာသွားပြီး အဖြေကတည်နေသလည်းဆိုတော့ အခြေခံဥပဒေဟာ အန်အယ်လ်ဒီ မဝင်တာ အခြေခံဥပဒေက တရားမျှတမှုမရှိဘူး၊ ထွက်လာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ (၅) ခုကလည်း တရား မျှတမှုမရှိ လက်မခံနိုင်လို့ ပါတီကိုဖျက်ပြီး ပါတီမှတ်ပုံတင် ဆက်မတင်တော့ဘဲနဲ့ တချက်တည်းပဲ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်တော့ ဘူးဆိုတဲ့ ကြေညာချက်ပေါ်မှာ ပြောနေတာကို။ တကယ်တော့ အခုနပြောသလို မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ဒီအခြေခံဥပဒေကိုလည်း ဘာမှ မထိမတို့ဘဲ အခြေခံဥပဒေကြီးကို ကြိုက်လှပါတယ်ဆိုပြီး မျက်စိစုံမှိတ် ဝင်တဲ့ဟာမျိုးကတော့ ခေါင်းလျှိုဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေးမျိုးလို့ ပြောရလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် မတရားဘူး၊ ဘယ်ဟာမှ မတရားဘူး၊ မတရားတဲ့ဟာတွေကိုတော့ ဆက်ပြီး လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုကာ ပါတီဖျက်၊ ပျက်ရုံသတ်သတ် လုပ်တဲ့ဟာကြတော့၊ ဘာမှရှေ့ လုပ်ငန်းစဉ်မရှိ၊ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ် မရှိ ပါတီပျက်ရုံသာပျက်ပြီး တရားမမျှတပါဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ တရားမမျှတဘူးဆိုတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဆယ်ဖို့ သက်သက် တခုတည်းနဲ့ ပါတီဖျက်ပြီး တိုက်မယ်ဆိုတာကြတော့ တဇွတ်ထိုးနိုင်ငံရေးလို့ ခေါ်ရလိမ့်မယ်။ ဘာကျန်နေလဲ ဆိုတော့ ပြည်သူလူထုနဲ့ နိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဒီတရားမမျှတပါဘူးဆိုတဲ့ အခြေခံ ဥပဒေကြီးကို မပြင်တော့ဘဲနဲ့ ဘေးကရပ်ပြီး မတရားဘူး၊ မတရားဘူး အော်နေလို့ ဒီ အခြေခံဥပဒေကြီးက automatic ပြင်ပြီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်နိုင်အောင် အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ဆိုတဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်ကိုချပြီး ရွေးကောက်ပွဲထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပါပြီး လုပ်မှသာ လက်တွေ့ကြတဲ့ pragmatic ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးကို မှန်မှန်ကန်ကန် ယေဘုယျအမြင်နဲ့သွားပြီး ပြည်သူ့အကျိုးကိုဆောင်တဲ့ ဝန်ကြီးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဒါဟာ ခေါင်းလျှိုဝင်တာ မဟုတ်သလို၊ တဇွတ်ထိုးလုပ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ မှန်မှန်ကန်ကန် တွေးပြီး ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ယှဉ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်တဲ့နည်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ လက်ရှိ စစ်အစိုးရက ပြဌာန်းထားတဲ့ အခြေခံက မမျှတတဲ့အတွက်ကြောင့် နောက်ပိုင်း လွှတ်တော်ထဲ မှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြန်ပြင်လို့ ရနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်မယ် ဆိုရင်တော့ ယခုလက်ရှိအခြေအနေရဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပါတီသစ်အနေနဲ့ လက်ရှိစာရင်းသွင်းထားတာ စုစုပေါင်း (၂၅) ပါတီရှိနေပြီ။ ပါတီအဟောင်းတွေထဲက ထပ်ပြီးတော့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမယ်လို့ ပြောထားတာ (၄) ပါတီလောက်ရှိနေပြီ။ တော်တော်များများက ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ တာစူနေကြတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ လာမယ့် လွှတ်တော်ထဲမှာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းက တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ကျန်တဲ့ (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းကို ဝင်ပြိုင်မယ့်အထဲမှာ အခုဝင်ပါမယ်ဆိုပြီး ကြေညာထားတဲ့ အဖွဲ့တွေထဲမှာ တပ်မတော်နဲ့ ဆက်နွှယ်နေတဲ့၊ တပ်မတော်နဲ့ ပိုနီးစပ်တဲ့အဖွဲ့တွေက ပိုများနေတယ်။ အခုဆိုရင် ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ တစညတို့ဆိုရင် စစ်တပ်ဖက်၊ စစ်တပ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ပါတီတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ အထင်အရှား ဖြစ်နေတော့။ ကျန်တဲ့ပါတီတွေက ဆရာပြောသလို လက်တွေ့ကျကျ ဝင်ပြီးတော့ ပြင်နိုင်ကောင်းရဲ့  ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဝင်တယ်ဆိုပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖြစ်သွားရုံ ဝင်ပြီးဘေးက လက်ခုပ်ဝင်တီးပေးလိုက်ရတဲ့အဆင့်မျိုး ဖြစ်သွားမှာကို ဆရာတို့အနေနဲ့ တွေးမိတာ ရှိပါသလား။
ဦးခင်မောင်ဆွေ ။ ။ ဦးသန်းလွင်ထွန်းအနေနဲ့ တခြားနည်းလမ်းရှိပါတယ်လို့ ယူဆပါသလား။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ကျနော်အနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိအားဖြင့် ပေါ်နေတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ။ ဒါကို ကျနော်အနေနဲ့ မေးခွန်းနဲ့ တင်ပြပေးတာပါ။ လက်ရှိအားဖြင့်ဆိုလိုရှိရင် ဒါ ကျနော်တို့ မြင်နေတဲ့အချက်တွေကို တင်ပြနေတာဆိုရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အနေနဲ့ နောက်ထွက်လာမယ့် လွှတ်တော်ထဲမှာ ဒီလိုမမျှတတဲ့ အခြေခံတွေနဲ့ဆိုရင် ဝင်ပြင်နိုင်လို့ မရနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ အစကတည်းက သပိတ်မှောက်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်နေကြတာကို။ ဆိုတော့ ဆရာတို့ အနေနဲ့ ကျတော့ တဖြည်းဖြည်းဝင်ပြီး ပြင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတော့ စောစောကလို အခုထင်ရှားလာတဲ့အချက်က ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဆိုရင် အဖွဲ့ဝင် သန်း (၂၀) ကျော်ရှိတယ်လို့ တရားဝင်ကြေညာထားတဲ့ စစ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်။ စစ်အစိုးရအဖွဲ့ကြီးက အခု နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီးဆိုတော့ ဆရာတို့အနေနဲ့ လာမယ့် လွှတ်တော် ထဲမှာ ဆရာတို့ကတော့ ဝင်ပြိုင်မယ်လို့ မပြောသေးပါဘူး၊ ဝင်ပြိုင်မယ့်လူတွေအနေနဲ့ ဆရာအခုန ပြောသလို လက်တွေ့ ကျကျ ဝင်ပြိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင် အခွင့်အလမ်း ရနိုင်မလား။
ဦးခင်မောင်ဆွေ ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတခြင်း၊ မမျှတခြင်းပေါ်မှာ လွှတ်တော်ထဲရောက်ခြင်း၊ မရောက်ခြင်းပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတတယ်၊ မမျှတဘူးဆိုတာကလည်း လက်ငင်းလက်တွေ့ ဖြတ်သန်းပြီးမှ တရားမျှတ ပါတယ်၊ တရားမမျှတပါဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ ကြိုပြီးတော့ တရားမမျှတပါဘူး။ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့က ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်ပြီးဝင်မှာမို့လို့ အစိုးရ backing ရှိတယ်၊ ကျန်တဲ့ တစည လည်း ရှိတယ်။ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးလည်း ရှိတယ်။ တခြားသော အစိုးရနောက်ခံနဲ့ ဝင်မယ့် ပါတီတွေ (၅) ခုလောက်ရှိလို့ ကျနော်တို့က ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်လို့ရှိရင် လွှတ်တော်ထဲကို အများစုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ ပြည်သူကို လျှော့တွက်ရာ ရောက်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အမြင်နဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ ပြည်သူတွေကို ဘာမှ မသိနားမလည်း၊ နိုင်ငံရေးနားမလည်တဲ့ ပြည်သူတွေ၊ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဘာမှ ခံစားမသိရှိတဲ့ ပြည်သူတွေလို့ လျှော့တွက်ရာ ရောက်မှာမို့လို့ ဒီလိုလည်း မတွက်သင့်ပါဘူး။ ဘယ်သူကမှ အာမခံချက် မပေးနိုင်ပါဘူး လွှတ်တော်ထဲကို အများစုရောက်မယ် မရောက်ဘူးဆိုတာ။ ပကတိအနေအထားက ဘာလည်းဆိုတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အများကြီးရောက်ဖို့က ပိုပြီး လိုအပ်ပါတယ်။ အခု ကျနော်တို့ ပြောနေတဲ့ တရားမမျှတပါဘူးဆိုတဲ့ အခြေခံဥပဒေတွေ၊ တရားမမျှတပါဘူးဆိုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေကို ကျနော်တို့က လွှတ်တော်ထဲရောက်တဲ့အခါမှ ပြင်လို့ရမယ့်အနေအထားမှာ ရှိနေတယ်။ တံခါးပေါက်က ဒီတစ်ခြပ်တည်းရှိတာမို့ အထဲကိုရောက်လို့ရှိရင် တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း နေရာပေါင်း (၃၀၀)၊ နေရာပေါင်း (၁၀၀) ဝင်မယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။ လူမျိုးတွေရဲ့  နယ်ပယ်တွေမှာ လူမျိုးတွေရဲ့  ပါတီတွေက မလွဲမသွေအနိုင်ရဖို့က တော်တော်ကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဒီမိုကရေစီကို စစ်စစ်မှန်မှန်သွားမယ့်လူတွေ ပါလာလို့ ရှိရင် ပြည်သူတွေက သိနိုင်၊ ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေးတဲ့အခါမှာ လွှတ်တော်ထဲမှာ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းက ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု အပေါင်း လူမျိုးစုတွေ ပါလာခဲ့ရင် တချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီအရေးကို လူ့အခွင့်အရေးတောင်းမယ့်အဖွဲ့တွေ၊ တချိန်မှာ လွှတ်တော်ထဲမှာ လူမျိုးစုတွေရဲ့  ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တွေနဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တွေ လူမျိုးတွေရဲ့  အခြေခံ အခွင့်အရေးတွေ၊ မွေးရာပါအခွင့်အရေးတွေကို အထဲမှာ နှစ်ဖွဲ့က ပေါင်းသွားပြီး ဒီမိုကရေစီအင်အားစုကြီးတရပ် ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးကြမှ ကျနော်တို့က အထဲမှာ ပိုပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီဘောင်ကို ချဲ့ ပြီးတော့ အာဏာနဲ့ အုပ်ချုပ် တာတွေ၊ ဒီမိုကရေစီပုံစံ မကျတာတွေကို တွန်းထုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေအောက်မှာ ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေ မှန်သမျှ၊ စစ်အုပ်စိုးရေးနိုင်ငံတွေ မှန်သမျှမှာ တမဟုတ်ချင်း လက်ဖြောက်တီးပြီး ချက်ချင်း နတ်ရေကန်ထဲ ချက်ချင်း ကြီးလာတဲ့ ဟာမျိုး ဘယ်လိုမှ မှန်းဆလို့မရပါဘူး။ စိတ်ကူးယှဉ်တာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဆရာပြောတဲ့အထဲမှာ ပြည်သူတွေကို လျှော့တွက်ရာ ရောက်မယ့်ဆိုတဲ့ အချက်ကလေးတခုပါပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြည်သူတွေကို လျှော့တွက်ရာဆိုတဲ့အစား ပြည်သူတွေရဲ့  လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ပြည်သူတွေရဲ့  ဆန္ဒတွေဟာ ဖော်ဆောင် နိုင်ခွင့် အနေအထားရှိပါ့မလားဆိုတာကို မေးစရာဖြစ်နေတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် စောစောကပြောခဲ့တဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို ပြောမယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ရဲ့  (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းက လွှတ်တော်ရဲ့  ကိုယ်စားလှယ်တွေပါမယ်။ ပြီးတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဆိုရင် အဖွဲ့ဝင် သန်း (၂၀) ကျော်ရှိတယ်လို့ ကြေညာထားတာ ရှိတယ်။ စံနစ်တကျ အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။ ဒီလူတွေနဲ့ဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြည်သူတွေရဲ့  ဆန္ဒတွေဟာ ဖော်ထုတ်နိုင် စွမ်း ရှိလာမလား။
ဦးခင်မောင်ဆွေ ။ ။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ကျနော်တို့ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းက တောင်းဆိုလို့ရှိရင် အခြေခံဥပဒေပြင်ခွင့်ကို စပြီး တော့ စဉ်းစားလို့ရပြီးဆိုတဲ့ ဥပဒေပါ တချက်ကရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်း အတိုက်အခံ ရှိလို့ ရှိရင် အခြေအနေက စပြီး ဖြစ်လာပါပြီ။ အဲဒီတော့ ကျနော်အခုပြောသလို ဘယ်လိုမှ ချက်ချင်းလက်ငင်းပြောင်းလို့ မရတဲ့ အခါမှာ ပြောင်းလဲလို့ရမယ့်အဆင့်တွေကို သွားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျနော်တို့ ရပ်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ အတိုက်အခံမရှိတဲ့ လွှတ်တော်ကြီးကို လွှတ်လိုက်ကြမလား။ အတိုက်အခံမရှိတဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြိုက်တာလုပ်ပါတော့လို့ လက်မြှောက်အရှုံးပေးကြမလား။ ဒါမှမဟုတ် လွှတ်တော်ထဲမှာ ကျနော်တို့ရဲ့  အတိုက်အခံအင်အားစုတွေကို ရသလောက် ထည့်ထားပြီး ထားလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ဟာတွေကို အကုန်လုံးမရတောင်မှ ဟန့်တားမှုကတော့ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဆရာတို့အနေနဲ့ အခုလက်ရှိ စစ်အစိုးရရဲ့  ကတိကဝတ်တွေနဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေအပေါ်မှာ ယုံကြည် လို့ ရတယ်လို့ ယူဆပါသလား။ အထူးသဖြင့် အခုဆိုလို့ရှိရင် ဒီ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကြားထဲမှာ နည်းနည်းမညီတဲ့ အချက်လေးတွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရတယ်။ အခုလက်ရှိ စစ်အစိုးရရဲ့  ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူးစွန့်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးယူထားတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာပဲ လောလောဆယ် ပါတီအဖြစ် နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် စာရင်းသွင်းလာတယ်ဆိုတော့ ဒါ နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်စည်းကမ်းချက် အမှတ် (၄) နဲ့ ငြိစွန်းနေ တာ ကို တွေ့ရတယ်။ ပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်လိုသူစကားမှာ နိုင်ငံဝန်ထမ်း မဖြစ်စေရ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် အတိအကျ ပါရဲ့ သားနဲ့ အခုလက်ရှိ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်နေတဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းတွေက ဘာဖြစ်လို့ ပါတီမှတ်ပုံတင် လိုသူတွေအဖြစ် စာရင်းသွင်းသလဲဆိုတာ ဒါတွေက စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ ဘောင်မဝင်တဲ့အချက်တွေ အများကြီး ရှိနေတော့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒီလိုအလားတူတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆလို့ မရနိုင်ဘူးလား။
ဦးခင်မောင်ဆွေ ။ ။ ဦးသန်းလွင်ထွန်း မေးပုံမေးနည်းက မှတ်ပုံမတင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ရေးဘက်က မေးနေတဲ့ သဘောဆောင်နေတယ်။ ကျနော်ပြောချင်တာကလည်း ကျနော်ကလည်း ဒီအစိုးရရဲ့  လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကို တစ်ကနေ တစ်ရာအထိ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း လက်ခံလို့ မဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျနော်က အခြေအနေကို လေ့လာပြီး ရှင်းပြနေတာ။ ဒီတော့ ဘယ်တုန်းကမှလည်း တရားမျှတမယ်လို့ ဘယ်သောအခါမှ မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ဥပဒေ တွေကို ဖျက်ဖို့ဆိုလိုရှိရင် အတွင်းက ဝင်ဖျက်တာက ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျတယ်။ အပြင်ကနေ လမ်းမပေါ်ကအော်ပြီး ဆဲနေရုံနဲ့ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ အတွေးအမြင်နဲ့ ကျနော်က ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော် တို့က ဦးသန်းလွင်ထွန်း ပြောသလို ပုဒ်မတွေပြန်စစ်ပြီး ဦးသန်းလွင်ထွန်း က ပြောလိုက်၊ ကျနော်က ပြန်ဖြေလိုက်ဆိုရင် ကျနော်က နအဖကို ကာကွယ်ရာ ရောက်သွားမှာပေါ့။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ကျနော်အနေနဲ့ အဲဒီလို ရည်ရွယ်ပြီးတော့ မေးတဲ့သဘောတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို အချက်တွေ မြင်လာရတဲ့အခါကျတော့ ဆရာတို့ရဲ့  ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သုံးသပ်ချက်တွေမှာ ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲရှိလာသလဲဆိုတာကို သိချင်လို့ မေးမြန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးခင်မောင်ဆွေ ။ ။ တခုရှိတာတော့ အခြေအနေတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ဦးသိန်းစိန်တို့ဟာ လူဝတ်လဲပြီး ပါတီ ထောင်တယ်။ အဲဒီတော့ ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ ပါတီထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ရဘူးဆိုတဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိနေပေမဲ့ သူတို့ အဲဒီ ဥပဒေတွေကို ဖောက်ဖျက်မလား။ တကယ်တမ်း ဖောက်ဖျက်တဲ့အခြေအနေမှာ တိတိကျကျ ဖောက်ဖျက်ပြီ ဆိုရင် ကျနော်တို့က ဝိုင်းရှုတ်ချရမှာပေါ့။ အခြေအနေက ဒီလောက်ထိသွား ရွေးကောက်ပွဲ ရှိနေပြီလား။ ရွေးကောက်ပွဲ နီးနေပြီလား။ Campaign period ရောက်ပြီလား။ အဆင့်ဆင့်သွားပြီးမှ တဆင့်ချင်း ကျနော်တို့က စောင့်ပြီး လေ့လာ ကြည့်ပြီးမှ ဝေဖန်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခုချက်ချင်း လူဝတ်လဲ ပါတီထောင်တာနဲ့ ကျနော်တို့က ဒီဝန်ထမ်းတွေကတော့ဖြစ်ရင် ရွေးကောက်ပွဲမပါရ၊ ပါတီမထောင်ရဆိုတာကို ဖောက်ဖျက်ပြီး ဦးသိန်းစိန်တို့က လုပ်နေပါပြီဆိုတာကို ကျနော်ကတော့ မပြောချင်ဘူး။ စောင့်ကြည့်ချင်တယ်။
...(၁၅) ကြိမ်မြောက်နာဂိုယာသင်္ကြန်အား စည်ကားစွာဖြင့်အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး...
(၁၅) ကြိမ်မြောက်နာဂိုယာသင်္ကြန်အား စည်ကားစွာဖြင့်အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ကြပါသည်
...(၁၅) ကြိမ်မြောက်နာဂိုယာသင်္ကြန်အား စည်ကားစွာဖြင့်...